Somalia online: Maanta waa 21/October waaa maalinkii uu dalka Somalia ka hirgalay kacaankii ciidamadu hogaaminayeen.
Waxay ay aheyd waajib wadani ah oo aan laga baaqsan karin.Waxaa dagaal geesinimo lagu ekeeyey gumeysigii madoobaa iyo kii saan cadaha ahaa ee ismodsiiyay in uu sii haysan karo ummadaan cisiga iyo karamada sare leh.Ciidankii xooga Dalka ee loo carbiyay sida heerka sare ah loona dhameystiray guud ahaan qalab iyo gaadid waxay u baahnaayeen ayaa u ruqaansaday dhankaa iyo goboladii gacanta ugu jiray gumeystayaashii caqli gaabyada ahaa.
Maalmo yar gudohood waxaa soo yeertay Jabuuti baa xorowday. Maalmayo Yar dabadeedna Dhulkii iyo cirkii ayaa isla dhawaaqay waxaa diyaaradhii xooga dalka Soomaaliyeed dul heehaabeen caasimadii xabashida,Dhulkii ayaa la gariiray. Meel ay galaan ayay waayeen maalmo fara ku tiris ah ayaa lagu xoreeyey Jigjigo, Harar iyo Dirir dhabe,Geesiyaashii maladayaasha ahaa waa ciidankii lagu ladaye waxaa ay sanka saareeen wadadii Addis Ababa gayn laheyd aan kuu soo koobee galbeed ayaa waxaa lagu xoreeyay maalmo fara ku tiris ah.
Sidoo kale waxaa godol cabsi keentay godladay Kenya waxay bilowday in ay somalia kabaha u qaado. Waxay bilowday in ay laaluush bixiso waxay bilow baryo iyo sasabasho,Alla way oo way Somalidaa ku maah maahda ninkii Qayrkiis loo xiirow adna soo qoyso Kenya waxay ogeyd in seeftu ku socoto. Caqlibayse laheyd markay kaba qaadka noo noqtay waxay si cad oo aan ka laab laabasho laheyn u cadeysay in maalin cad ay ka guuri doonto gobalada NFD. Alla way oo way ma, maanta ayay kenya shiidaalkeygiii ubucdayda yaalay hawaystay aduunyoy waayo badan.
Waxaan xasuustaa in nin oday ahi ii sheegey maalin maalmaha ka mid ah oo ahayd maalin taarikhi ah in gabar ka mid ah gabdhihii xooga dalku ay inta u istaagtay si karti ,geesinimo iyo kalsooniyi ka muuqto u tiri Anaga gabdhaha ah kaliya hana loo daayo kenya. Ragu waa in ay xoreeyaan Soomaaligabeed iyo Jabuuti. Kenya waxaa ku filan gabdhaha Soomaaliyeed,Wale shalay maanta ma ahan.
Aduunyoy Waala lay aduunyoy waayo badan maanta kenya waxay ku taamaysaa in ay mulkiso Magaalooyin iska daa in ay hawaysatee xataa sirdoonkeedu ka baqi jiray in uu galo. Alla ciil iyo calool xumo waynaa Alla maanta awood yari badanaa. Waaan hubaa hadii dadkeygu midoobo ,hadii dadkeygu ka talaasulo qolkan yar ee qabiilka, hadii dadkaygu aragti wadani ah la yimaado in meeshii shalay iyo ka korba an gaari karno.Su,aashuse waxay tahay dadkaygu waa dad noocee ah mase laga yabaa in ay ka tanaasulaan qolka yar ee qabiilka.Maya kolay rajada rabi lagama quusto laakin anigu rajo aad u badan kama qabo. Waayo dadkeygu maanta waxay noqdeen riwaayad shaleemo ka shidan.Maalin walba waxaa xalfado loo qabta qabiil goboleed waxay isku xag xagtaan beel beel iyo jufo jufo. Waxay isku fiirsadaan si hoose oo liidnimo ah.Cadowgeena soo jireenka ah waa ay ku kala hormaraan ,Ukala tar tamaan ,Una kala nacab leeyaan. Hubaashii waxaa hubaal biyo kama dhib caan ah in aan maanta u joogo ciil iyo coloolxumo wajigabax iyo yax yax.Aniga oo Somali ah in aan adoon sanwayn aan u ahaado adoon waa maalin aduunyo iyo la joogeeda.
Ugu danbeyntii aan ku soo gaba gabeeyo talo aan usoo jeedinayo guud ahaan ummdan sharafta iyo cisiga leh ee Soomaaliyeed gaar ahaan dhalinyarada.Walaalyaal dhalinyaro ma ogtihiin in mustaqbalkeeni lumay? Soo ma ogidin in aan ku soo kornay Ciil iyo Calool xumo, Qaxooti iyo Liidnimo, Gaajo iyo Dagaal!?.Walaalyaal Caruurteena ma wadadii aan soo marnay ayaan ku sii daynaa.Maya walaalayaal waxaa jirta Wada kale. Waxaan u horseedi karnaa Guul iyo Barwaaqo Sharaf iyo Cisi Aqoon iyo Dharag.Walaalyaal maanta waxaa wadankeenii ka hana qaaday hanaan Dowladnimo Ha iska lahaado dul duleelo laakin hadiii aan la shaqayno. Macanaha hadii aan anagu iskaa wax u qabso kula shaqeyno.Hadii walaalayaal aan u istaagno aayaha dalkeena.Hadii aan la shaqeyno ciidanka ,Wasaaradaha ,Hay,adaha amniga iyo guud ahaan dowlda oo hadafkeenu ahaado sidii aan ku soo ceshan laheyn sharaftenii iyo karaamadeenii. Hadii walaalayaal aan u shaqeyno si daacad ah wadaninimo ah. Waan hubaa in aan soo noolaan doonaa hubaashii haa waan soo noolaan donaa.Waan soo ceshan karnaa sharfteenii.Haa gacmaheena ayaan ku soo ceshan karnaa.
Anigu waxaan la shaqeeyaa Dowlada Somalia. Habeyn iyo maalin waan soo jeedaa waxaana u shaqeeyaa iskaa wax u qabso. Waxaana ku haminayaa in aan ka bad baadsho caruurtayda. Halaagii aan soo maray iyo foolxumada maanta qarankeenu Dhaxyaal walaalyaal idinkana sidaas ayaan idinka Rajaynaa
Cali Aar Caroone